दैनिक सेवन गर्नुहोस् यी खानेकुरा जसले बढाउँछ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता — Sanchar Kendra
दैनिक सेवन गर्नुहोस् यी खानेकुरा जसले बढाउँछ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता
तपाईं आफ्नो दैनिक खानामा दही समावेश गर्नुहुन्छ ? लसुन नि ? यसमा पक्कै पनि तपाईंको जवाफ सकारात्मक आउनेछ। लसुन त हाम्रो खानाको अभिन्न हिस्सा नै भयो । तरकारीमा लसुन नभई हुन्न । त्यसैले त यो भान्सामा अनिवार्य हुनेगर्छ ।
तपाईंलाई हेक्का हुनुपर्छ, दही स्वादिलो मात्र होइन अत्यन्तै लाभदायक पनि हुन्छ। खासगरी पेटको लागि दही सेवन उपयोगी मानिन्छ। दहीमा भएको प्रोबायोटिक तत्वले खाना पचाउनमा मद्दत गर्छ । यसैगरी दहीमा प्रोटिन तथा क्याल्सियमसहित भिटामिन बी ६ तथा बी १२ हुन्छ, जुन स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । दहीमा पोटासियम पनि पाइन्छ, जसले पाचनतन्त्रमा फाइदा गर्छ ।
भिटामिन ‘सी’को राम्रो स्रोत हो, कागती । कागतीका साथै सुन्तला, अंगुर पनि भिटामिन ‘सी’ तथा एन्टीअक्सिडेन्टको राम्रो स्रोत हो। भिटामिन ‘सी’ ले सेतो रक्तकोषिका उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ, जसले संक्रमणसँग लड्न मद्दत गर्छ।
नेपालीहरूमाझ चिया लोकप्रिय छ। चियामा पनि कालो चिया तथा ग्रीन टी धेरैको रोजाइमा पर्ने गर्छ । ग्रीन टी तथा कालो चियामा पर्याप्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट तत्व रहेको हुन्छ, जसको सेवनले रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्छ।